Maxkamada ugu saraysa Hindiya oo uxukuntay Hinduuga lahaashiyaha masjid 16 qarni ku tukanayeen Muslimiinta dalkaas – Caalamka Online
Maxkamada ugu sareysa dalka Hindiya aya la safatay kooxaha Hinduuga iyada oo u xukuntay in lahanshiyaha masaajid ay qarniyo badan ku tukan jireen Muslimiinta dalkaas kaas oo ku yaala Magaalada ayodhi.
Maxkamada ayaa la rumaysan yahay in ay gadaal ka riixayeen masuuliyiinta haysa tala sakaas oo ku sifaysan islaam nacayb, waxaana tawitter ku taageeray Ra’isul wasaaraha dib loo doortay ee dalkaas Nadara Modi, isaga oo go’aanka ay maxkamada ku siisay Hiduuga goobta uu masjidka ku yiil ku sheegay mid cadaalad ah.
Sidoo kale maxkamada oo isku dayaysa in ay muslimiinta qanciso ayaa waxa ay uxuntay in ay dowlada siiso dhul kale si ay uga dhistaan Majid ay ku cibaadaystaan kuna gutaan waajibaadka alle.
Muslimiinta ayaa ayaa in kabadan 16 qarni ku cibaadaysanayay Masjidkaas waxaana kooxaha Hinduuga sanadkii 1992 ay bur buriyeen Masjika, kooxaas oo ku doodayay in uu ku dhashay goobta uu masjidka ku yaalo ninka ay Caabudaan oo lagu magacaabo Lord Ram.
Hindiya ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha sida xun loola dhaqmo Muslimiinta, waxaana ka jira tacadiyo fara badan iyada oo ay hay’daha udooda xuquuqda aadanaha indhaha ka qabsadaan.